Landa Isipele Nokuvumelanisa - Isitoreji Sefu Samahhala
Enzela amafayela akho isipele ngokuphephile
Layisha futhi gcina amafayela ukusuka kunoma iyiphi ifolda kukhompuyutha yakho, ikhamera, namakhadi e-SD efwini. Ungakwazi ukuthola okuqukethwe kwakho kunoma iyiphi ifoni, ithebhulethi, noma ikhompuyutha usebenzisa i-Google Drayivu, kanye nezithombe namavidiyo akho kokuthi I-Google Izithombe.
Landa Isipele Nokuvumelanisa Landa Isipele Nokuvumelanisa
Ikhasimende le-G Suite? Funda mayelana Nokusakaza Kwefayela LeDrayivu.
Alukho uhlelo lokusebenza lweDrayivu ye-Linux ngalesi sikhathi. Sicela usebenzise IDrayivu kuwebhu nakumadivayisi akho eselula.
Vumelanisa i-Google Drayivu nekhompuyutha yakho
Phequlula futhi buka amafayela ukusuka kokuthi drive.google.com kufolda ye-Google Drayivu kukhompuyutha yakho.
Vula, hlela, futhi izinguquko kunoma yimaphi amafayela akho.
Noma yiziphi izinguquko ozenza kumafayela zizovumelaniswa noma yikuphi.
Thola IDrayivu Noma Yikuphi
Engeza amafayela kuDrayivu ukusuka ku-Mac yakho futhi azovumelaniswa namanye amadivayisi akho — ngokuzenzakalelayo.